I-nonstop San José ukuya eChicago iinqwelomoya zibuyela kwiAmerican Airlines
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » isikhululo » I-nonstop San José ukuya eChicago iinqwelomoya zibuyela kwiAmerican Airlines
Airlines • isikhululo • uhambo ngomoya • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • iindaba • Ukwakha kwakhona • Xanduva • Tourism • uthutho • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel • Iindaba zase-USA ezaphulayo • Iindaba ezahlukeneyo
Inkonzo engapheliyo kwiChicago-O'Hare evela eMineta San José Airport ibuya kwiAmerican Airlines.
Iinqwelo moya zaseMelika zibuyisela inkonzo yaseSan Jose-Chicago.
Iinqwelo moya zaseMelika zisebenzisa inqwelo moya yeBoeing 737-800 yendlela yaseSan Jose-Chicago.
Isikhululo senqwelomoya saseSan Jose siyaqhubeka nokufuna ukunxiba iimaski.
Amagosa eNorman Y. Mineta San José International Airport (SJC) ibhengeze ukuba yonke imihla inkonzo engamisiyo kwisikhululo senqwelomoya iChicago O'Hare International Airport (ORD) iyaqhubeka kwiAmerican Airlines namhlanje. Inkonzo eyandisiweyo phakathi kweSilicon Valley kunye neWindy City isebenza amatyeli amane ngeveki, ngoLwesibini ukuya ngoLwesihlanu.
Inqwelomoya indiza eSan José nge-1: 07 PM PST ngenqwelomoya, iBoeing 737-800, ifika eChicago malunga neeyure eziyi-4.5 kamva ngo-7: 40 PM CST.
"Kuluyolo ukwamkela inkonzo yeAmerican Airlines eChicago," utshilo uJohn Aitken, uMlawuli kwa Isikhululo senqwelomoya iMineta San José. “Nangona oku kungomnye umqondiso oqinisekileyo wokuchacha, sibhiyozela ngokuqonda ukuba abahambi kufuneka bahlale bekhuthele malunga nempilo nokhuseleko. Siyavuyisana namaqabane ethu aseMelika ngeli nyathelo lisa phambili kwaye siyabulela ngokuqhubeka nokutyala imali eSilicon Valley. ”
Ngelixa ukubuya kwenkonzo engamisiyo kwizixeko ezikhulu kubonisa uphawu oluqinisekileyo lokubuyiswa kohambo, kunye namanqanaba e-COVID anyukayo kwamanye amazwe, isikhululo seenqwelomoya siyaqhubeka nokufuna ukunxiba iimaski kwaye sikhuthaza abahambi ukuba baqhubeke nokuziqhelanisa noluntu.
IChicago-O'Hare ibuyela kuluhlu lweenkonzo zomoya zaseMelika e-SJC kulandela ukumiswa kwenkonzo yenqwelomoya ngo-2020 ngenxa yokuhla kwemfuno zohambo ezinxulumene ne-COVID-19.
Isikhululo senqwelomoya iMineta San Jose International Airport (SJC) sisikhululo senqwelomoya saseSilicon Valley, ishishini elizixhasayo nelilawulwa sisiXeko saseSan Jose. Isikhululo seenqwelomoya, ngoku sikunyaka wama-71, sakhonza phantse abakhweli abazizigidi ezili-15.7 ngo-2019, ngenkonzo engapheliyo kuMntla Merika naseYurophu naseAsia.